WAA MAXAY NOOCA DIGAAGGA COCHINQUIN? - BEERAHA DIGAAGA
Haddii dukaan beeralay ah oo bilaabaya inuu doorto digaagga, waa inuu fiiro gaar ah u leeyahay kohinhin, kuwaas oo kaliya ma ahan ukumo, laakiin sidoo kale wuxuu dhisi karaa si wanaagsan ee murqaha.
Cochinquins waa nooc qurux badan.
Maanta, waxaa si aad ah loo arki karaa beeraha digaaga ama guriga.
Sanado badan, waxay joojisay in lagu qiimeeyo sida hilibka lo'da ee digaagga, iyo maanta waxaa la koray oo kaliya ujeedooyin qurxinta iyo ilaalinta ay.
Weli waxaa muhiim ah in la fiiriyo farriintan shimbiraha, sababtoo ah waa mid aad u qurux badan.
Waa maxay waxyaabaha kale ee Kochinquin uu leeyahay, waxaad sii akhri doontaa maqaalkan.
Waa kuwee sifooyinka noocaan oo kale ah oo qurux badan? Ama wax kasta oo ay ku faani karto - miyuu qurux badan yahay?
Tani waxay noqon kartaa mid aan ku wareersanayn digaagga kale ee digaagga. Waxaa la barbardhigi karaa xajmiga cuncunka, qaabka wareega jirka iyo lugaha yaryar.
Tani waxay leedahay hal dhibaato, Shimbiruhu waxay u nugul yihiin cayilka.
Waxaa jira laba qeybood oo muuqaalka muuqaalka ah ee jilicsan ee Cochinquin:
Markii hore, jilicsanaanta Cochinquin waxaa lagu dhaliyey Shiinaha. Waxaa jira noocyadaas shimbiraha loo isticmaalo ujeedo gaar ah oo loogu talagalay qurxinta. Waxay ku arki karaan hoolalka ama hantida hodanka ah, shimbirta ayaa sidoo kale la siiyay dadka ajnabiga ah. Taas ka dib, waxay bilaabatay in ay jiilka Yurub.
Nooca labaad wuxuu u maleynayaa in markii ugu horeysay ee uu caan ka yahay Vietnam, laakiin maaha ujeedooyin qurxin, laakiin hilibka.
Waa maxay quruxda badan ee ku saabsan guurka this ee shimbiraha? Waxaanu ku taxluuqa ugu weyn Cohinquin muuqaalada:
Waxa ugu horreeya ee aan macquul aheyn in la ogaado waa cabbirka weyn ee shimbir iyo baalasha quruxda badan ee jirka oo dhan. Waa mid aad u dheer, dhererkeedu wuxuu gaadhaa ilaa toddobaatan mitir.
Wareegtu waxay leedahay hagaagsanaanta sharafta leh. Muuqaal kale oo muuqaal ah waa madaxa yaryar ee maqaarka cas, kaas oo u muuqda mid aad u fiican oo ka soo horjeeda jiritaanka muuqaalkiisa.
Tayada tayada caansaankani waa is waafajinta xaaladaha cimilada iyo xaaladaha heerkulka kala duwan laga bilaabo -30 digrii ilaa + 60 digrii Celsius. Iyo ugu muhiimsan, xaaladaha kala duwan ee haynta shimbir ma lumin tayada.
Ukuntu ay qaadeen haweenkan ayaa waxay leeyihiin naqshad adag. Sababtoo ah xooggiisa wanaagsan, waa midka ugu caansan ee Kochinquin waa mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee digaagga.
Marka la abuuro taranka Brahma, tani waxay ahayd midda ugu weyn. Soosaarka ukumahoodu ma aha mid sare, qiyaastii boqol ukumood ayaa la siiyaa laba iyo toban bilood. Hase yeeshee, waa mid aad u wanaagsan, taas oo ka duwan noocyo kale oo badan oo kale, kiciska Coquinos sanadka oo dhan iyo xitaa jiilaalka.
Caano kohinhin qaybta ugu badan waa hilibka hilibka. Miisaanka haweenku waxa uu gaarayaa afar kiilo garaam, miisaanka ragga wuxuu ku dhowaad shan kiilo.
Maxaa kale ee la xusi karo waa xasilloonida iyo isku dheelitirka shimbirta. Cochinquins ayaa lagu qiyaasi karaa oo ma ah qaab hab wareeg ah oo nolosha ah.
Waxaa habboon in la fiiriyo xaqiiqda ah in haddii aad si kastaba ha ahaatee go'aansato in ay bilaabaan tarankaan, shil yar ayaa dhici kara - shimbiraha ayaa noqon kara wakhti dheer.
Laakiin maaha wax qiimo ah oo ku saabsan, sababtoo ah waxay wali ku koraan baadad. Tani waa astaamahooda kala duwan.
Ka fikir qaar ka mid ah noocyada Cochinquin.
Noocyada ugu caansan Cochin waxaa ku jira Blue iyo Pygmy Cochinquin. Laakiin waxaa jira kuwa kale oo yaryar oo loo yaqaan: Smoky, White iyo Black Kokhinhin.
Maanta waxaannu ka hadli doonnaa kaliya labada nooc ee ugu horreeya, maaddaama dhammaan noocyada kale ay yihiin noocyada hooseeya, oo aysan lahayn sifooyin aan muuqan, marka laga reebo midabka baalasha.
Sidaas, Blue Cochinhin, maxaad ka sheegi kartaa isaga
Ugu horreyntii, shimbir shimbir shimbir shiinaha shiinaha ah oo China ah ayaa lagu xannibay magaalada Shanghai. Wuxuu bilaabay in uu u tarbiyo sidii hilib hilib ah. Magacooda ugu horeeya waxay ahaayeen "Shanghai Chickens". Wakhti ka dib, sababtoo ah xayawaan-diid aan caadi aheyn, waxaa loo wareejiyay dhowr shimbiro oo farshaxan.
In Europe, noocyada this shimbiraha u muuqday qiyaastii 1850.
Midabka maqaarka ee ukunta waa bunni. Wax soo saarka ukumaha ee dheddiguhu waa yar yahay wuxuuna ka dhigaa 110 ukumood sanadkiiba.
Miisaanka riixitaanka Cochin Breed waa Blue celcelis ahaan 4.5 kiilogaraam, miisaanka digaaguna wuu ku kala duwan yahay 3.5 kiilogaraam.
Noocyada qashinka ah Cochinquin Blue:
Boodh aad u boodh ah, boodh aad u badan oo dabacsan, kaas oo daboolaya dhammaan jirka shimbirta iyo xitaa lugaha. Laga soo bilaabo dhinaca waxaa laga yaabaa in ay u muuqato in shimbirta la gashanayo surwaal gaaban. Xitaa faraha addimada ayaa daboolaya baalasha. Sababtoo ah cirifka noocan ah, qaabka jidhka ayaa u muuqda.
Tani waxay calaamad u tahay madaxa yar, indhaha qotoda dheer. Midabka indhaha waa kohinhina buluug, badiyaa casaan-cas. Mucjiso yar oo qaab ah caleen.
Bill ayaa lagu xayiray jinsi jaale ah. Dheguhu waa yar yare, dheer iyo casaan. Qoorta ma ahan mid gaaban oo aan dheereyn. Gadaal u gaaban waa mid ballaaran oo sare u qaadaya dhexda ballaaran.
Xabadku waa mid aad u horumarsan. Baalashka shimbirku waa mid yar oo wareegsan. Lugaha shimbirta waa gaaban waana la ballaadhan yahay. Waxaa sidoo kale jira dabo gaaban. Ragga ayaa si aan fiicnayn loo soo saaray. Lugaha waxaa ku badan midab jaalle ah.
Chicks buluka kohinhina socodka dheer ee barkad, laakiin ka dib waqti cayiman ka dib markii ay ka baxsadaan.
Wanaagsan Tani waa:
Shimbiraha qaangaarka ah waa kuwo aan qabyo ahayn. Ka jawaab si fiican isbedelka heerkulka.
Shimbiraha ayaa aad u degan.
Dumarka waa hilib aad u fiican.
Tani waxaa lagu hayn karaa qolal yar.
Waxaa jira hal dhibic, oo aan macquul ahayn in aan la sheegin, tani waa waxa shimbirku u nugul yahay gumeysi.
Waxaa sidoo kale xiiso leh in laga akhriyo dabeecadaha ugu fiican ee broilers.
Maxaad xiiso u yeelan kartaa in aad ka sheegto qaabka dwarf ee kokhinhin?
Dwarf Kochinh waa dalxiis laga soo saaro. Kala duwanaanshahaan waxaa lagu duubay Shiinaha, oo ah hoyga Boqortooyada, kadibna waxaa loo keenay waddamada Europe.
Ha raacin magaca shimbirta in yar tahay. Ma aha. Noocaankan wuxuu leeyahay qaababka gaarka ah, kuwaas oo hoos ku taxan.
Qaababka noocyada noocan ah:
Shimbirta waxaa lagu kala saaraa qaabkeedu hooseeyo iyo qaabka dhirta, oo leh madax yar oo ku yaalla shanlada iyo xajmiga. Guntashadu waxay u eeg tahay qori. Daboolka shimbirta waa mid yar oo u eg kubad. Guud ahaan, shimbirtu waxay u muuqataa mid weyn oo wareegsan.
Shimbirta indhaha midabkeedu waa mid casaan ah, oo laga yaabo in ay noqoto bunni.
Baalashka shimbirku waa yar yahay kuna haboonaan jirka.
Dhabarka kichinquin ee dwarf waa ballaaran oo kor u kaca daboolka.
Taabashadu sidoo kale waxay ku jiraan faraha iyo maadada.
Dhamaan jidhka shimbirta waxaa lagu daboolay baalal badan.
Suufka jilicsan iyo gaaban.
Caloosha kokhinhina waxay u egtahay wareega iyo buuxa sababtoo ah bacaha geedka.
Miisaanka hal digaag ah waa qiyaastii 0.8 kiilo, miisaankuna waa ka yar yahay qiyaasta 0.7 kiilo.
Haddii aad isbarbardhigto haweenka iyo labka, ka dibna Dumarka waxay u muuqdaan kuwo ka weyn.
Laba iyo toban bilood, hal haween ah ayaa awoodaan in ay qaadaan qiyaastii 80 ukumood, laakiin waxaa laga yaabaa inay ka yartahay qiyaastii 50 ukun. Miisaanka hal ukun waa qiyaastii 30 garaam. Qolfaha ukunta waa mid shiidan, mararka qaarkoodna waa bunni fudud.
Heerka noolaanshaha ee shimbiraha qaangaarka ah iyo guurka yar yar waa celceliska boqolkiiba 95.
Kooxaha wanaagsan Tani waa:
Shimbiraha waxay leeyihiin muuqaal aad u qurux badan oo qurux badan.
Waxay yihiin kuwo naxariis leh oo deggan.
Caanaha waxaa lagu gartaa macaamilkeedii mulkiilaha, si dhakhso ahna wuxuu u noqonayaa mid roon.
Maxay yihiin sifooyinka mawduuca iyo beerista Kohinquin?
Sida hore loo soo sheegay, jajabkani wuxuu ku habboon yahay xaalad kasta oo sii kordheysa. Shimbiraha way badan yihiin xasilooni, hagaagsan, oo gaabis ah, waxay caan ku yihiin dulqaad, iyada oo sifooyinka noocan oo kale ah ee dayactirka ay ku haboonaan doonaan guri yar.
Haddii aad go'aansato inaad koraan shimbir gaar ah oo loogu talagalay ujeedooyin qurxinta, ka dibna aadan awoodin si ay uga baxdo cimilada roobka qoyan. Maadaama biyahu ay saameyn aad u xun ku yeeshaan jirkooda. Qaar waxay aaminsanyihiin in qorraxda ay sidoo kale saameyn xun ku leedahay qaar ka mid ah Cochinquin, laakiin ma jirto wax caddayn ah oo qoraal ah.
Waxa ugu wanaagsan in la ilaaliyo dumarka iyo ragga ka mid ah kokhinhin jilicsan qolal gaar ah. Tani waa si loo hubiyo in marka laysku daro si looga hortago waxyeelada boogaha iyo kabaha. Si aad u quudiso shimbiraha, fursada ugu fiican waxay noqoneysaa in la isticmaalo quudinta jilicsan, taas oo markaa hubaal ka dhigta horumarka caadiga ah iyo koritaanka jirka.
Waxaa ugu wanaagsan in la quudiyo hilibka yar-yar ee cuntada la kariyo, haddii aysan taasi suurtogal ahayn, baruurta xayawaanka waa in lagu daraa cuntada la iibsaday. Tani waa in la sameeyaa ilaa 45 maalmood oo nolol ah.
Horeba da'da qiyaastii laba toddobaad, shimbiraha waxay ku dari karaan hadhuudhka cuntada. Tan iyo shimbiraha ayaa lagu gartaa xajistooda cajiibka ah, waxaad u baahan tahay inaad isha ku hayso cuntadooda.
Da'da lix iyo toban toddobaad ee cuntadooda waa inay noqdaan qadar ku filan borotiinka. Ka dib 16 toddobaad, cadadka borotiinka waa la yareeyn karaa, ka dibna shimbiruhu waxay helayaan daloolkooda saxda ah.
Sida hore loo soo sheegey, gu'gabtu waxay u baxaan wakhti dheer, laakiin dhammaadka dhirta ayaa weli koraysa.